ရုပ်သေးသမ္မတွေရဲ့ ပြဿနာ | Monywa Gazette
Home ဆောင်းပါး ရုပ်သေးသမ္မတွေရဲ့ ပြဿနာ
The Economist မဂ္ဂဇင်းက ဆောင်းပါးတစ်စောင် ဖတ်ရတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့လက ရွေးကောက်ပွဲမှာ အပြတ်အသတ် အောင်ပွဲခံသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်မှာ ဘိုလစ်ဘီးယားသမ္မတ လူးဝစ်အာရဆေး (Luis Arce) ဖြစ်လာတယ်။
နောက်ရက်မှာတော့ သူ့ကို ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ အီဗိုမိုရဲလစ် (Evo Morales) အပြန်ကို ပြည်သူတွေက သောင်းသောင်းဖြဖြ ကြိုခဲ့ကြတယ်။ အီဗိုမိုရဲလစ်ကဘယ်သူပါလဲ။ သူက ရွေးကောက်ပွဲ မဲလိမ်မှုတွေပေါ်ပေါက်ပြီးနောက် လူထုက ဆန္ဒပြကြလို့ဘိုလစ်ဗီးယားကနေ အာဂျင်တီးနားကို ထွက်ပြေးခဲ့ရသူ သမ္မတဟောင်းပဲ။
သမ္မတသစ် ရွေးချယ်ခံရသူ မစ္စတာအာရဆေးက “သူဟာ သူ့ကိုယ်ပိုင်သာ” ဖြစ်တယ်။ ဘယ်သူ့လူမှ မဟုတ်ဘူး။ အီဗိုမိုရဲလစ်အနေနဲ့ လာမယ့်အစိုးရသစ်မှာ အခန်းနေရာ မရှိပါဘူးလို့ ဆိုတယ်။ မစ္စတာ အာရဆေးက ပြီးခဲ့တဲ့ သမ္မတ အီဗိုမိုရဲလစ် လက်ထက်မှာ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး တာဝန်ယူခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့လူတွေ ယုံကြည်နေတာက အီဗိုမိုရဲလစ်ဟာ သမ္မတသစ် အာရဆေးရဲ့ နှာခေါင်းပေါက်နဲ့ အသက်ရှုနေလိမ့်မယ်လို့ မြင်ကြတယ်။
အခုလို ရုပ်ပြသမ္မတတွေ ဖြစ်နေတာ မစ္စတာအာရဆေး (Mr Arce) တစ်ယောက်ထဲ မဟုတ်ဘူး။ လက်တင်အမေရိကမှာ ကျန်သူတွေ ရှိသေးတယ်။ သြဇာကြီးတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေက နောက်ကွယ်ကနေပြီး ရှေ့မှာ ရုပ်ပြတင်ထားတာ။ ကိုလံဘီယာနိုင်ငံက အီဗန်ဒုကေး (Iván Duque) ကလည်း အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ ဆီးနိတ်လွှတ်တော်အမတ်တစ်ယောက်ပဲ။ သူ့ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ သမ္မတနှစ်ဆက် တာဝန်ယူခဲ့သူ ကွန်ဆာဗေးတစ် ရှေးရိုးစွဲဝါဒီ အယ်ဗာရို အူယိဘ် (Álvaro Uribe) က ကျောထောက်နောက်ခံပေးပြီး ထိပ်ကို တင်ပေးခဲ့တယ်။ အကြောင်းကတော့ သမ္မတဟောင်း အူယိဘ်က သက်တမ်းနှစ်ခု တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးဆိုတော့ ထပ်ပြီး ထမ်းဆောင်ခွင့် မရှိတော့ဘူး။
အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှာလည်း ၂၀ဝ၇ ကနေ၂၀၁၅ ခုနှစ်အထိ သမ္မတဖြစ်ခဲ့သူ ခရစ္စတီးနာဖာနန်ဒက်ဇ် ဒီကရစ်ချနာ (Cristina Fernándezde Kirchner) က အယ်လ်ဘာတို ဖာနန်ဒက်ဇ် (Alberto Fernández) နဲ့ သဘောတူညီချက် ရယူနိုင်ခဲ့တယ်။ ဘာမှ ဆက်စပ်အမျိုးတော်တာတော့မရှိဘူး၊ သဘောတူညီချက်က သူနဲ့အတူရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖက်အဖြစ် အရွေးခံပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ အနိုင်ရရှိဖို့ပဲ။
အီကွေဒေါက နောက်တစ်နိုင်ငံပါ။ ၂၀ဝ၇ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အထိ နိုင်ငံမှာ အာဏာထက်ခဲ့သူ ရေဖဲလ် ကော်ရီးယား (Rafael Correa) က လူငယ်စီးပွားရေးပညာရှင် အန်ဒရေ အာရုဇ် (Andrés Arauz) ကို ရှေ့ထွက်သမ္မတတင်ပြီး ပြန်လာဖို့ ရှိနေတယ်။ မစ္စတာကော်ရီးယား (Mr. Correa) က အခု ဘယ်လ်ဂျီယံမှာ ရှိနေပြီး၊ သူ့နောက်ကွယ်မှာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုနဲ့ မျက်ကွယ်အပြစ်ပေးခံထားရတယ်။
အခုလို ရုပ်ပြသမ္မတတွေ ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာ အကြောင်းရှိပါတယ်။ အချက်တစ်ခုကတော့သက်တမ်း ကန့်သတ်ထားတာဖြစ်ပြီး၊ နောက်တစ်ခုကတော့ သက္ကရာဇ် ၂၀ဝ၀ ခုနှစ်များ ဝန်းကျင်မှာ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေ ဖောဖောသီသီဖြစ်လာတာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ခေါင်းဆောင်တွေ ကံကောင်းထောက်မစွာ နေရာရလာကြပြီး၊ လူကြိုက်များလာ၊ နိုင်ငံရေးအရ အားကောင်းသြဇာထက်လာကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ကစားကွက်ကောင်းက တစ်ခါတလေမှာတော့ ပြဿနာကြုံရတတ်ပါတယ်။
မစ္စတာ ကော်ရီးယား (Mr.Correa) ထင်တာက သူက သူ့ ဒုသမ္မတ လီနင်မိုရန်နို (Lenín Moreno) ကို သူ့ပါတီ ဆက်ခံသူအဖြစ် ရွေးတင်လိုက်ရင် အဆင်ပြေမယ် ထင်ခဲ့တယ်။ သူ့ဆက်ခံသူက သူ့အတွက် လုပ်ပေးမယ် ထင်ခဲ့တယ်။ မစ္စတာအူယိဘ် (Mr. Uribe) ကတော့ သူ့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဂျူအန်မန်နျူယယ်ဆန်တို့စ် (Juan Manuel Santos) ကို မပေးချင်ပေးချင်နဲ့ ၂၀၁၀ မှာ သူ့ကိုဆက်ခံဖို့ ထောက်ခံပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီနှစ်ယောက်က နောက်ပိုင်းမှာ တကယ့်ကို ရန်သူကြီးတွေ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။
ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံမှာတော့ ၂၀ဝ၃ ကနေ ၂၀၁၀ အထိ အာဏာရှိခဲ့သူ လူးဝစ်ဇ် အင်နာစီယိုဒီဆီးလ်ဗား (Luiz Inácio Lula da Silva) က ဒီလ်မာရူးဆက်ဖ်လ် (Dilma Rousseff) သူလိုလားတဲ့သမ္မတအဖြစ် နေရာပေးခဲ့တယ်။ မစ္စရူးဆက်ဖ်လ် (Ms. Rousseff) က တစ်ကွက်ကျော်ပြီး ဒုတိယအကြိမ် သက်တမ်းအတွက်ပါ ထပ်အရွေးခံခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘတ်ဂျက်ဥပဒေကို ချိုးဖောက်လို့ အယုံအကြည်မရှိ အဆိုတင်သွင်းခံရတယ်။
ဒီလို အကွက်ရွေ့ ကစားတာတွေ အလုပ်ဖြစ်တာတောင်မှ ကြီးမားတဲ့ ပြဿနာတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ရုပ်ပြသမ္မတတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ အလျောက် ချိနဲ့အားပျော့တဲ့ သမ္မတတွေ ဖြစ်လာကြပါတယ်။ သူ့ကို ကျောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့သူက ချမှတ်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို လိုက်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပဲ။ နောက်ကလူကတော့ ဘာတာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှုမှမရှိဘဲ အာဏာ ကျင့်သုံးနေနိုင်တယ်။
ကိုလံဘီယာနိုင်ငံကို ကြည့်ပါ။ အလယ်အလတ် သဘောထားရှိသူ မစ္စတာဒုကေး(Mr. Duque) က သမ္မတဖြစ်တာ ၂၆ လ ရှိပြီ။ ခုချိန်ထိ သူ့အစိုးရအပေါ်မှာ တံဆိပ်တုံးထုရတာ မရှိရသေးဘူး။ မစ္စတာ အူယိဘ်(Mr. Uribe) ကတော့ FARC ပြောက်ကျားတွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးသဘော တူညီချက်ဖြစ်တဲ့ အချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အထူးခုံရုံးတွေကို ဖျက်သိမ်းဖို့ လုပ်နေရတယ်။ အရင်တုန်းက မစ္စတာဆန်တို့စ် ညှိနှိုင်းသဘောတူညီခဲ့တာ။ မစ္စတာဒုကေး (Mr. Duque) ကတော့ အခုအချိန်မှာ ကုလသမဂ္ဂ၊ အခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ သဘောတူညီထားချက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာ ခုခံပြောဆိုနေရတယ်။
မစ္စတာဒုကေးလက်ထက်မှာ လုံခြုံရေးက ယိုယွင်းပျက်စီးလာတယ်။ သူ့အရင်ကနဲ့ လက်ရှိကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများက မစ္စတာအူယိဘ် (Mr. Uribe) နဲ့ နီးစပ်သူတွေဖြစ်ကြပြီး၊ ဘာလုံခြုံရေးစီမံမှုအတွေ့အကြုံ မရှိကြဘူး။ မစ္စတာအူယိဘ်ပါတီရဲ့ ထင်ရှားသူတွေက ဖရော်ရီဒါမှာ ဒေါ်နယ်ထရမ့်အတွက် မဲဆွယ်ထောက်ခံစည်းရုံးပေးနေကြတယ်။ အကယ်၍ သူ့ပြိုင်ဘက် ဂျိုးဘိုင်ဒန်သမ္မတဖြစ်လာရင်တော့ ခက်ပြီ၊ မစ္စတာဒုကေး (Mr. Duque) က အသစ်တဖန် ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမယ် မသိဘူး။
မစ္စတာဒုကေးထက်ပိုလို့ အရေးပါတဲ့ အာဂျင်တီးနားက နိုင်ငံရေးသမား မစ္စတာဖာနန်ဒက်ဇ် (Mr. Fernández) ကတော့ သူ့ အာဏာစက် တည်ဆောက်ရေးကို ကြိုးစားနေရတယ်။အငြင်းပွားဖွယ် ဒုသမ္မတ၊ လက်ဝဲဝါဒီ လူကြိုက်များခေါင်းဆောင်ကတော့ ဗျူရိုအေးရိစ်ရဲ့ လမ်းမတွေပေါ်က လူထုတွေကို ဆက်ပြီး ထိန်းချုပ်နိုင်တုန်းပဲ။ မစ္စတာ ဖာနန်ဒက်ဇ် (Mr. Fernández) က ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရှည်ကြာဆုံး လော့ခ်ဒေါင်း (Lockdown) ကို ချမှတ်ကျင့်သုံးခဲ့တယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို မတားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ နည်းနည်းတော့ အချိန်ဆွဲထားနိုင်ခဲ့တယ်။
ဒီအချက်က နိုင်ငံရေးအရ အားနည်းချက် ဖြစ်စေခဲ့ပြန်တယ်။ အစိုးရက ငွေတိုက်စာချုပ်ဝယ်ယူထားသူတွေနဲ့ ကြွေးမြီ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြင်ဆင်ရေးအစီအစဉ် ညှိနှိုင်းနေရာကနေပြန်နှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြဿနာက လူထုယုံကြည်နိုင်တဲ့ စီးပွားရေး အစီအစဉ်တစ်ခုကို ငွေဖြည့်တင်းဆောင်ရွက်ဖို့လည်း မဖြစ်နိုင်ပြန်ပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်တာကတော့ ခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက်ကြားမှာ သဘောတူညီမှုတွေ မရလို့လည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မစ္စတာဖာနန်ဒက်ဇ် (Mr. Fernández) က သူနဲ့အတူ ဝင်ပြိုင်ဘက်အပေါ်လာဘ်စားမှု စွဲချက်တွေကနေ ကယ်တင်ချင်တာနဲ့ တရားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို ဦးစားပေးလုပ်ချင်နေတာကြောင့် ပေးလိုက်ရတဲ့ နိုင်ငံရေးတန်ဖိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါတွေကတော့ ရုပ်ပြသမ္မတတွေ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြဿနာတွေပါပဲ။ သူတို့ကို ကျောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ စပွန်ဆာတွေမှာ နိုင်ငံအတွက် အကျိုးစီးပွားဆိုတာ စဉ်းစားကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ မစ္စတာအူယိဘ် (Mr. Uribe) ကတော့ သူ့ရန်သူတွေကို လက်စားချေဖို့ပဲ စိတ်သန်နေပြီး နောက် ၂၀၂၂ ခုနှစ်မှာ နောက်ထပ် ရုပ်ပြသမ္မတအသစ် တစ်ယောက်ကို တင်လိုနေပါတယ်။ ကိုလံဘီယာနိုင်ငံရေးကို ဆက်ပြီးကွဲပြဲဖို့ ဖန်နေပါတယ်။ မစ္စတာကော်ရဲလား (Mr. Correa) ကလည်း လက်စားချေချင်နေပါတယ်။ မစ္စတာဖာနန်ဒက်ဇ် (Ms. Fernández) ကတော့ တရားရုံးတွေကို ထိန်းချုပ်ချင်နေပါတယ်။
မစ္စတာအာရဆေး (Mr. Arce) အတွက်တော့ ကက်ဘိနက်ဝန်ကြီးအဖွဲ့ နာမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့ပြီး၊ အဲဒီမှာ အရင်လူ မစ္စတာမိုရဲလစ်နဲ့နီးစပ်သူက ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအဖြစ် ပါဝင်နေပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ (ဆိုရှယ်လစ်စနစ်အတွက် လှုပ်ရှားမှု Movement to Socialism)က လူထုအကျယ်အပြန့် ပါဝင်ပြီး၊ အရင်သမ္မတဟောင်းကို ဝေဖန်ပြောဆိုနေကြသူတွေလည်း ပါဝင်နေကြပါတယ်။ မစ္စတာအာရဆေး (Mr. Arce) ကတော့ အရင်လူ မစ္စတာ မိုရဲလိဇ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ စိတ်ကူးယဉ်နေမှုတွေ မရှိပါဘူး။ “သူကတော့ ပြောင်းလဲမယ့်သူ မဟုတ်ပါဘူး”လို့ သမ္မတသစ်က ပြောပါတယ်။
သိပ်မကြာခင်မှာတော့ မစ္စတာ အာရဆေး (Mr. Arce) တစ်ခုခု ရွေးချယ်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အာဏာ တည်အောင်လုပ်မှာလား၊ ဒါမှမဟုတ် အရှုံးပေးမှာလား ဆိုတာပါပဲ။
ဘာရယ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံရေးက အတော့်ကိုရှုပ်ထွေးတာပဲ။
The Economist. (November 14, 2020 edition).
Previous articleတိုင်းစည်ပင် နည်းဥပဒေအတွက် ထောက်ရှုစရာ ၁၀ ချက်
Next articleမန္တလေးက ကိုဗစ်လှိုင်း မုံရွာအပေါ် ဘယ်လိုတွေ ရိုက်ခတ်နေသလဲ